Igwe anaghị agba nchara Pet Pet Comb Manufacturers & Suppliers | China igwe anaghị agba nchara Pet mbo Factory
Pet Groomer ishingrụcha mbo
Nke a na-eji ejiji edozi bụ nnukwu ọrụ, ọ dị arọ, ma ọ dị ike.Ọ nwere aluminom na azụ na mkpuchi mgbochi na-eme ka ọ ghara ibelata.
Onye na-azụ anụ ụlọ na-emecha mkpo na-edozi nchara nchara nchara, ọ na-abanye uwe mkpuchi kachasị mfe.
Onye na-emezi anụ ụlọ a na-emecha ọnụ nwere ezé na ezé sara mbara. Anyị nwere ike iji njedebe sara mbara maka ebe ndị buru ibu karị, na njedebe dị warara maka obere ebe.
Ọ bụ ahịhịa anụ ụlọ ga-emerịrị maka akpa onye ọ bụla.
Metal Pet ishingrụcha mbo
Ngwongwo ihe eji emezi ihe eji eme ihe bu ihe di nkpa nke nwere ike ime ka anu ulo gi di ocha ma di nma site na iwepu umuaka, nkpuru, ntutu adighi nma, na unyi.
Metal Pita gụchara mbo bụ fechaa, adaba, na mfe-na-ebu.
ndị metal Pita gụchara mbo ezé nwere dị iche iche spacing, Abụọ di iche iche nke spacing nke ezé, Twozọ abụọ iji, ihe adaba na practical.it nwere ike inye zuru okè ejiji.
Igwe anaghị agba nchara Dog mbo
1.This mbo a na-arụpụtara si igwe anaghị agba nchara ihe onwunwe, nke bụ nchara na corrosion na-eguzogide, sturdy, inogide na-adịghị mfe imebi.
A na-eme nkịta nkịta igwe anaghị agba nchara nke na-eji ire ụtọ ma na-adịgide adịgide, gburugburu nkịta nkịta nkịta agaghị ọkọcha akpụkpọ anụ ahụ ma ọ ga-enye ahụmịhe nke ọma na-enweghị imebi anụ ụlọ gị, ọ nwekwara ike igbochi ọkụ eletrik na-enweghị atụ.
3.Nke a igwe anaghị agba nchara nkịta mbo na-enyere aka wepu nkịta na nwamba 'tangles, ute, rụrụ ntutu na unyi, ọ na-akpali anụ na mma mgbasa ọbara, oké maka gụchara na-efegharị gị Pita ntutu.
Igwe anaghị agba nchara mbo N'ihi Pet
Nke a ibo maka Pita na-rụrụ nke inogide igwe anaghị agba nchara.
Ngwongwo igwe anaghị agba nchara maka anụ ụlọ na-adaba aka nke ọma ma na-adịkwu jụụ karịa ogologo oge.
Nke a igwe anaghị agba nchara mbo maka Pita nwere wider tooth.It zuru okè n'ihi untangling ute ma ọ bụ na-enye a okokụre anya na coat.It bụkwa adabara ndị na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ ebe dị ka ihu na paws.
Igwe anaghị agba nchara mbo maka Pita zuru okè maka gụchara na efu, na-enye onye ị hụrụ n'anya ọkachamara ọkachamara.
Metal Dog Steel mbo
1.Round ezigbo ígwè nkịta ígwè mbo ezé nwere ike ichebe akpụkpọ nkịta na-enweghị mmerụ ọ bụla, na-ewepu tangles / mats / rụrụ ntutu na unyi, dị mma na anụ ahụ na-emetụ gị n'ahụ.
2.This metal nkịta ígwè mbo ka nke elu àgwà igwe anaghị agba nchara ihe, elu ekweghị ekwe, enweghị nchara na-adịghị deformation.
Ngwakọta nkịta ígwè ahụ nwere ezé ezé na ezé ezé. Ezé ezé ezé nwere ike iji edozi isi maka nkịta na nwamba, ihe ndị ahụ na-eme ka ọ dị nro.
Metal Dog ejiji mbo
1.My nkịta na-eji ejiji edozi zuru oke maka ịkọwa ebe ajị ajị dị n'akụkụ ihu na ụkwụ, yana ịkọkọ ajị ajị ajị gburugburu akụkụ ahụ.
Ngwakọta nkịta nkịta ígwè dị mkpa bụ ihe dị mkpa nke nwere ike ime ka anụ ụlọ gị dị ọcha ma dị mma site na iwepu ụdọ, akwa, ntutu na-adịghị ọcha, na unyi, ọ na-ahapụ ntutu isi ya nke ọma ma dịkwa mma.
3.Ọ bụ fechaa mbo nke ike ọgwụgwụ-free ejiji. Nke a bụ ihe zuru oke ga - enwerịrị nkịta eji eji ejiji iji nyere aka na-elekọta nkịta na mkpuchi. Ezigbo mechie ezé combs maka zuru ezu ejiji. Ezé nwere ngwụcha ngwụcha jiri nwayọ na-eme ka anụ ahụrụ gị zuo ike maka akwa ahụ ike.